ओलीको बोलीले आफै सत्ता गुमाए, आफ्नै पार्टी फुटाए : चन्द्र भण्डारी « News24 : Premium News Channel
ओलीको बोलीले आफै सत्ता गुमाए, आफ्नै पार्टी फुटाए : चन्द्र भण्डारी
गुल्मी । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.चन्द्र भण्डारीले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली र ब्यवहार साह्रै हेपाहा भएको आरोप लगाएका छन् । उनले आइतबार गृहजिल्ला गुल्मीमा नेपाली कांग्रेस रेसुङ्गा नगर कार्य समितिले आयोजना गरेको शुभकामना आदन–प्रदान तथा चियापान कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘केपी ओलीले अरुलाई हेप्न पनि कति सकेका हुन् ? ओलीले आफू सत्तामा छँदा माइतीघर मण्डलामा तीन जना कांग्रेसका मान्छे देख्थे । अहिले हेर्नुस् त, यही कांग्रेस सत्तामा छ । यही कांग्रेस प्रदेशका विभिन्न प्रदेशमा मन्त्री छन् । अझ गण्डकी प्रदेशमा त मुख्यमन्त्री समेत कांग्रेसकै छन् । हैन अरुलाई हेप्न पनि कति सकेको होला ओलीले ?’
उनले थप भने, ‘त्यसरी नै ओलीले प्रचण्ड जीलाई हेपे, माधवजीलाई हेपे । यही कारणले नै ओलीजीले आफैले सत्ता गुमाए र आफ्नै पार्टी फुटाए ।’
‘मधेशवादी दलका जम्मा पन्द्र जना सांसद थिए । ती पन्द्रै जनालाई मन्त्री बनाउन सक्ने केपीले सत्ता साझेदार माओवादीलाई जम्मा ५ जना मात्रै मन्त्री दिन सकेको भए अहिले यस्तो हुन्थ्यो ?’ उनले प्रति प्रश्न गर्दै भने, ‘कञ्जुस र अबुझ भएपछि के गर्ने ?’
त्यस्तै उनले अहिले कै सत्ता गठबन्धनले ५ वर्षसम्म सरकार चलाउनु पर्नेमा जोड दिए । कम्युनिष्टका गृह जिल्लाका केही नेताहरुमाथि प्रश्न उठाउदै भने, ‘मैले अस्ती सुन्दै थिएँ कि उहाँहरुले ३० वर्षमा हुन नसकेको विकास हामीले ३ बर्षमा ग¥यौं, भन्नु भएछ । यही हो तीन वर्षमा भएको विकास ? तीन–तीन जना मन्त्री भएको जिल्लाको विमानस्थल अझै बन्न सकेको छैन । म सांसद छँदा ५२ वटा पुल पारेको थिएँ । ति पुलहरु अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । कतिपय त सुरु नै हुन सकेका छैनन ।’
उनले रिडीको तीनमुखे पुलसहित ६९ वटा महत्वपूर्ण सडकहरुमा आफैले करोडौं रकम पारेको दाबी गरे । नेता भण्डारीले गरीबहरुका घर बनाउनेदेखि जिल्लामा जनताको घर–घरमा धारा पुराउन आफैले ठाउँ–ठाउँमा करोडौंको लागतका खानेपानी योजना पारेको जिकिर गरे ।